Injineer Yariisow oo kullan aan caadi ahayn la qaatay dhigiisa dalka Uganda (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Injineer Yariisow oo kullan aan caadi ahayn la qaatay dhigiisa dalka Uganda (SAWIRO)
Wafdi uu hoggaaminaayo wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Injineer C/raxmaan Cumar Cismaan (Injineer Yariisow) oo haatan socdaal shaqo ah ku jooga magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda ayaa halkaasi kullan aan caadi ahayn kula qaatay dhigiisa dalkaasi Mr. Frank Tumwebaze.
Labadaasi wasiir ayaa kulankoodii uga wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen xagga xirfada, aqoonta, tababar-siinta shaqaalaha dowladda, islamarkaana ay isdhaafsadaan macluumaadka dhinaca wararka ah.
Mr. Frank Tumwebaze oo ah wasiirka warfaafinta dalkaasi Uganda ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay kulanka uu la qaatay dhigiisa dalka Soomaaliya, isagoona dhinaca kale xusay in labada dal Soomaaliya iyo Uganda ay ka dhexeeyso xiriir soo jireen ah.
Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Injineer C/raxmaan Yariisow ayaa isna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay kulanka uu la qaatay dhigiisa dalka Uganda Mr. Frank Tumwebaze.
Injineer Yariisow ayaa sheegay in kulankooda ay uga hadleen arrimo ay ka mid tahay xoojinta xiriirka labada wasaaradood ee Soomaaliya iyo Uganda oo ay ka mid yihiin hirgelinta warbaahinta bulshada, sidii TV-yada dalka looga wada dhigi lahaa mid “Digital” ah iyo sidii ay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ay dhinaca tababarada uga caawin lahaayeen.
Injineer Yariisow ayaa inta uu ku sugan yahay dalka Uganda u kuurgali doonno sida ay u shaqeeyso warbaahinta bulshada dalka Uganda, waxaana markii uu safarkiisa soo gaba-gaboobo dib ugu soo laaban doonnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.